Aqri qodobadi kasoo baxay Shirki ugu danbeeyey ee kooxda ICG ee Somalia
Wasiirka arrimaha dibadda Talyaaniga Giulio Terzi, afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya Sharif Hassan Sheikh Adan, Raisul wasaaraha Soomaaliya Abdiweli Mohamed Aliiyo wakiilo ka socda Puntland, Galmudug iyo Ahlu Sunna Wal Jamaca ayaa dhamaan shirka ka hadlay.
Kooxda xiriirka caalamiga ayaa dib-u fiirin ku sameysay horumarada siyaasadeed waxayna ku cel celisay sida ay uga go’antahay xiliga ku meel gaarka inuu dhamaado 20ka bisha siddeedaad 2012 sida ku xusan Axdiga ku meel gaarka, heshiiskii Jabuuti, heshiiskii Kampala, Roadmap-kaiyo shirarkii wadatashiyada ahaa ee xigay. Gaar ahaan, Kooxda ICG ayaa soo dhoweysay heshiiska ay wada gaareen madaxda dowladda mar ay shir isagu imaadeen magaalada Nairobi 22 June isla markaana isku af gartay qabyo qoraalka kama dambeysta ah. Qabyo qoraalka ayaa la hor keenayaa Golaha Dastuurka Qaranka si ay u saxiixaan si ku meel gaar ahaan.
Khariidad shaqo ee isku dhafan waa in loo hagaajiyaa baarlamaanka cusub iyo dowladda taasoo looga gol leeyahay in lagu xoojiyo qaab dhismeedka laanta sharci fulinta dowladda si sare looga qaadoilaalinta xuquuqda aadanaha iyo cadaaladda.
Kooxda ayaa hoosta ka xariiqday fariintii ay si wadajir ah u qoreen kuna saabsaneyd qas-wadayaasha iyo kuwa ka soo horjeeda geedi socodka nabadda in loo gudbinayo golaha wasiiraha ee IGAD iyo kooxda daba galka ee QMsi cuna qabateyn looga soo oogo.
Madaxa kooxda ICG ayaa soo magac qaaday arrin soo cusboonaatay oo ku saabsan burcad badeeda. Kooxda ayaa soo magac qaaday warbixintii ugu dambeysay ee Shirkii Dubai ee ka hor tagga burcad badeeda kaasi oo la qabtay bisha June 28 si dowladaha gobolka ay awoodlagula dagaalamayo burcad badeeda u yeeshaan isla markaana lagu dhowrayo shuruucda caalamiga ee la dagaalanka burcad badeeda.